Indawo yokuhlala yasehlathini ethe cwaka
Indawo yokuhlala yasehlathini enembonakalo yothando enesitayile esinegadi eyodwa yindawo efanelekileyo yeendwendwe ezixabisa i-ecology, i-aesthetics, kunye nolwakhiwo olukumgangatho ophezulu. Ifakwe kumbindi wePromno Landscape Park-ibhayosphere ekhuselweyo.
Indawo yokuhlala yasehlathini enembonakalo yothando enesitayile esinegadi eyodwa yindawo efanelekileyo yeendwendwe ezixabisa i-ecology, i-aesthetics, kunye nolwakhiwo olukumgangatho ophezulu. Ifakwe kumbindi wePromno Landscape Park-ibhayosphere ekhuselweyo phantsi kweProjekthi yeProjekthi ye-2000 yaseYurophu, ijikelezwe yindawo ekhethekileyo yehlathi le-moraine kunye namachibi.
Umtsalane okufutshane wembali ubandakanya i-Ostrów Lednicki - imvelaphi yoBukumkani basePoland ukusuka kwinkulungwane ye-X, iGniezno - ikomkhulu lokuqala lasePoland, kunye nePoznań - isixeko sanamhlanje esinedolophu endala edlamkileyo. Idolophu ekufutshane - iPobiedziska, ikumgama oziikhilomitha ezi-4.
Sijonge phambili kutyelelo lwakho kule ndawo ibukekayo. Kuyo nayiphi na imibuzo okanye imibuzo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngefowuni, i-imeyile, okanye ngokobuqu.